RAHARAHA MAFANA EO ANIVON’NY CENI : Hanao fanambaràna i Hery Rakotomanana, anio
Andrasana ato anatin’ny folo andro izay mety ho fivoaran’ilay raharaha fikasana hanala mpikambana iray eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Céni). 13 mars 2020
Nilaza ny filohany, Hery Rakotomanana fa hamory mpanao gazety ary hanao fanambaràna sy hitondrana fanazavana mahakasika ny trangan-javatra izay misy eo anivon’ny samy mpikambana amin’izao fotoana izao. Raha tsiahivina dia tsy niditra lalina tamin’ny fangatahana nataon’ny filohan’ity rafitra mahaleo tena miandraikitra ny fifidianana ity ny Hcc.
Nambarany fa ny eo anivon’ny Céni ihany no tokony hamaha ny olana amin’ny alalan’ny fampiharan’izy ireo ny fitsipika anatiny natao hifehy an’ireo mpikambana. Manana folo andro ireo mpikambana handinihana ny raharaha. Fantatra, araka ny vaovao voaray, fa efa azo lazaina ho niala an-tsitrapo ihany ny filoha lefitry ny Céni, Thierry Rakotonarivo. Voalaza fa efa tsy nanatrika ny fivorian’ireo mpikamban’ny Céni intsony ny tenany tamin’ny fotoam-pivoriana farany teo. Heverina fa fanazavana mifandraika amin’izay raharaha izay no hanaovan’ny filohan’ny Céni, Hery Rakotomanana fanambaràna anio.